ဆရာဝန်တွေကို လန့်ပြီးထွက်ပြေးသွားစေတဲ့ ဆေးရုံပေါ်က လူနာအမျိုးသမီး - CeleCloud
ဆရာဝန်တွေကို လန့်ပြီးထွက်ပြေးသွားစေတဲ့ ဆေးရုံပေါ်က လူနာအမျိုးသမီး
A female patient at the hospital who scared the doctors and ran away. Here isaweird thing for the audience. In 1972,afemale patient came to Cedar Senai Hospital.
It is not uncommon forapatient to come to the hospital, but this woman is quite strange. The woman was wearingawhite vest to protect herself from the virus, and hospital staff planned to treat her asa“visiting patient.”
Then the hospital staff noticed that her face was quite pale and straight. At first glance, it looks as ifadoll is dressed and its teeth are gritted. Hospital staff then pulled the woman’s mouth tightly open and rinsed the blood.
At that moment, the two doctors, who had been smiling all the time, suddenly laughed, and the two doctors fled withoutatrace. Unlike human teeth, its teeth are sharp and elongated. She then tookastep back, stared at the hospital staff, and walked out of the hospital.
This incident actually happened and to this day no one knows for sure where this strange woman came from.
ဆရာဝနျတှကေို လနျ့ပွီးထှကျပွေးသှားစတေဲ့ ဆေးရုံပေါျက လူနာအမြိုးသမီး။ ပရိသတျကွီးအတှကျ ဒီတစျခါ ထူးထူးဆနျးဆနျး အကွောငျးအရာလေးတစျခုကို ဖောျပွပေးလိုကျခငြျပါတယျ။ လှနျခဲ့တဲ့ ၁၉၇၂ ခုနှစျတုနျးက Cedar Senai ဆိုတဲ့ ဆေးရုံကို လူနာအမြိုးသမီးတစျယောကျ ရောကျလာခဲ့ပါတယျ။
ဆေးရုံကို လူနာလာတယျဆိုတာ ထူးဆနျးတဲ့ကိစ်စတော့ မဟုတျပမေယျ့လညျး ၄ငျးလူနာအမြိုးသမီးကတော့ အတောျလေးကိုထူးဆနျးနပေါတယျ။ ၄ငျးအမြိုးသမီးဟာ ရောဂါပိုးတှကေို ကာကှယျနိုငျတဲ့ အဖွူရောငျဝတျစုံကို ဝတျဆငျထားခဲ့ပွီး ဆေးရုံက ဝနျထမျးတှကေလညျး သူမကို ဆေးရုံလာပွတဲ့ လူနာလို့ထငျပွီး ကုသပေးဖို့ စီစဉျထားကွပါတယျ။
အဲ့ဒီနောကျ ဆေးရုံကဝနျထမျးတှေ သတိထားမိလိုကျတာကတော့သူမရဲ့မကြျနှာဟာ အတောျလေးကို ဖွူဖပျဖွူရောျဖွစျနပွေီးမကြျနှာတညျကွီး ဖွစျနပေါတယျ။ အမှတျတမဲ့ကွညျ့လိုကျရငျအရုပျတစျရုပျကို အဝတျစားဝတျပေးထားသလားလို့တောငျထငျမှတျရပွီး အံကိုလညျး တငျးတငျးကွိတျထားတာတှေ့ရပါတယျ။ ဒီနောကျမှာတော့ ဆေးရုံဝနျထမျးတှဟော တငျးတငျးစေ့ထားတဲ့ ဒီအမြိုးသမီးရဲ့ ပါးစပျကို ခကျခကျခဲခဲ ဆှဲဖှငျ့ပွီး ထှကျလာတဲ့ သှေးတှတှေကေို ဆေးကွောသုတျသငျပေးခဲ့ကွပါတယျ။
အဲ့ဒီအခြိနျမှာပဲ တခြိနျလုံး အပွုံးအရယျမဲ့နတေဲ့ မကြျနှာကွီးဟာ ရုတျတရကျ ရယျပွလိုကျတဲ့ အခါမှာတော့ ဆရာဝနျနှစျယောကျဟာ ဆောကျတညျရာမရပဲ ထှကျပွေးသှားကွပါတယျ။ သူ့ရဲ့သှားတှဟော လူသားတှရေဲ့သှားနဲ့မတူပဲ ခြှနျထကျပွီး ရှညျရှညျမြောမြောပုံစံမြိုး ဖွစျနပေါတယျ။ ထို့နောကျ သူမဟာ ခွကေို တစျလှမျးခွငျးလှမျးပွီး ဆေးရုံဝနျထမျးမြားရဲ့ မကြျနှာကို စိုကျကွညျ့ကာ ဆေးရုံပွငျပသို့ တရှေ့ရှေ့ ထှကျခှာသှားပါတယျ။
ဒီဖွစျပကြျရပျဟာ အမှနျတစျကယျ ဖွစျပှားခဲ့တာဖွစျပွီး ယနေ့အခြိနျအထိ ဒီထူးဆနျးတဲ့ အမြိုးသမီးဟာ ဘယျကလာလဲဆိုတာ ဘယျသူမှ သခြောရရောစှာ မသိကွပါဘူး။
ဆရာဝန်တွေကို လန့်ပြီးထွက်ပြေးသွားစေတဲ့ ဆေးရုံပေါ်က လူနာအမျိုးသမီး။ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဒီတစ်ခါ ထူးထူးဆန်းဆန်း အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ချင်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉၇၂ ခုနှစ်တုန်းက Cedar Senai ဆိုတဲ့ ဆေးရုံကို လူနာအမျိုးသမီးတစ်ယောက် ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
ဆေးရုံကို လူနာလာတယ်ဆိုတာ ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတော့ မဟုတ်ပေမယ့်လည်း ၄င်းလူနာအမျိုးသမီးကတော့ အတော်လေးကိုထူးဆန်းနေပါတယ်။ ၄င်းအမျိုးသမီးဟာ ရောဂါပိုးတွေကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့ အဖြူရောင်ဝတ်စုံကို ဝတ်ဆင်ထားခဲ့ပြီး ဆေးရုံက ဝန်ထမ်းတွေကလည်း သူမကို ဆေးရုံလာပြတဲ့ လူနာလို့ထင်ပြီး ကုသပေးဖို့ စီစဉ်ထားကြပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက် ဆေးရုံကဝန်ထမ်းတွေ သတိထားမိလိုက်တာကတော့သူမရဲ့မျက်နှာဟာ အတော်လေးကို ဖြူဖပ်ဖြူရော်ဖြစ်နေပြီးမျက်နှာတည်ကြီး ဖြစ်နေပါတယ်။ အမှတ်တမဲ့ကြည့်လိုက်ရင်အရုပ်တစ်ရုပ်ကို အဝတ်စားဝတ်ပေးထားသလားလို့တောင်ထင်မှတ်ရပြီး အံကိုလည်း တင်းတင်းကြိတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီနောက်မှာတော့ ဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေဟာ တင်းတင်းစေ့ထားတဲ့ ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ ပါးစပ်ကို ခက်ခက်ခဲခဲ ဆွဲဖွင့်ပြီး ထွက်လာတဲ့ သွေးတွေတွေကို ဆေးကြောသုတ်သင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ တချိန်လုံး အပြုံးအရယ်မဲ့နေတဲ့ မျက်နှာကြီးဟာ ရုတ်တရက် ရယ်ပြလိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ ဆရာဝန်နှစ်ယောက်ဟာ ဆောက်တည်ရာမရပဲ ထွက်ပြေးသွားကြပါတယ်။ သူ့ရဲ့သွားတွေဟာ လူသားတွေရဲ့သွားနဲ့မတူပဲ ချွန်ထက်ပြီး ရှည်ရှည်မျောမျောပုံစံမျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။ ထို့နောက် သူမဟာ ခြေကို တစ်လှမ်းခြင်းလှမ်းပြီး ဆေးရုံဝန်ထမ်းများရဲ့ မျက်နှာကို စိုက်ကြည့်ကာ ဆေးရုံပြင်ပသို့ တရွေ့ရွေ့ ထွက်ခွာသွားပါတယ်။
ဒီဖြစ်ပျက်ရပ်ဟာ အမှန်တစ်ကယ် ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ယနေ့အချိန်အထိ ဒီထူးဆန်းတဲ့ အမျိုးသမီးဟာ ဘယ်ကလာလဲဆိုတာ ဘယ်သူမှ သေချာရေရာစွာ မသိကြပါဘူး။